विद्यालय बन्द गर्ने सरकारले देखेन धुँवाको मुस्लो ! « Janata Samachar
विद्यालय बन्द गर्ने सरकारले देखेन धुँवाको मुस्लो !
काठमाडौं । मध्य नेपालको आकाश धुलो, धुँवा र ग्यासले टम्म ढाकेको ६ दिन बितेको छ । जसका कारण आँखा पोल्नेदेखि सासै फेर्न गाह्रो हुनेसम्मको समस्याबाट सर्वसाधरण पीडित छन् । यहिकारण कयौं व्यक्तिमा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यासमेत देखा पर्न थालेको छ । स्थिति असमान्य बन्दै गएपछि सरकारले मंगलबारबाट चार दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ । तर, विद्यालय बन्द गरेको सरकारले वायू प्रदुषण बढाउने तत्वहरुलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने कामतर्फ भने खासै ध्यान दिएको छैन् ।
आँखा पोल्ने गरी वायू प्रदुषणको स्तर बढ्दै जाँदा यसरी धुँवाको मुस्लो फालेर इँटा भट्टाहरु निर्वाद रुपमा चलिराखेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंको हावा प्रदुषित हुनु पछाडीको एउटा कारण हो इँटा उद्योगहरु । जसले कचौराजस्तो काठमाडौंमा धुवा फैलाउँने र ढाक्ने काम गर्दै आएको थियो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्ता उद्योगहरुले फाल्ने धुँवाका कारण खतरा झनै बढ्ने विज्ञहरुको दाबी छ ।
आसपासका बाटोमा धुलो उडाउने र धुँवा फाल्ने काम यसरी निर्वाद चलिरहँदा यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन् । यहाँ कुनै प्रकारको सावधानी अपानाएको पाइँदैन् । यसरी हजारौंको संख्यामा सञ्चालित उद्योगधन्दा वा कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ, इँटा भट्टाबाट निस्कने धुवाँले पनि निरन्तररूपमा वातावरणलाई प्रदूषित पारिरहेका छ । यसले मानवस्वास्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशहरुमा वायु प्रदुषणको विकराल अवस्था छ । पहिलो पटक नेपालका पूर्वी भागमा तराई, पहाड र हिमालसम्मै तुवाँलोले सीमा नाघेको छ । यस पछाडीको कारण नेपाल लगायत भारतका वनमा लागेको डढेलो प्रमुख कारण भएपनि नेपालमा सञ्चालित उद्योग धन्दा र कलकारखानाले उत्पादन गर्ने प्रदुषण पनि वायुमण्डल प्रदुषित बनाइराखेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । वायु प्रदुषणमा सुधार नआउनुमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
राजधानीमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधनले हानीकारक धुवाँ फालिरहेको छ । संसारकै सबैभन्दा प्रदुषित सहरमध्ये काठमाडौं एक नम्बरमा परेको पनि बुधबार ६ दिन बित्यो तर पनि काठमाडौं सहितका विभिन्न ठाउँको वायुमण्डलमा सुधार आउन सकेको छैन । प्रदुषण उत्कर्षमा पुगेको वायु प्रदुषण स्थिर रहनुको पछाडी यी थोत्रा सवारीको पनि ठूलो हात छ ।
वायु प्रदुषण यतिबेला विश्वकै चिन्ताको विषय बनिरहेको बेला नेपालमा सञ्चालित सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएपनि सवारी धनीहरुले नियम कार्यान्वयव गर्न लापरबाही गरिरहेका छन्, सरकारले स्पस्ट नीति नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन तदारुकता नदेखाएको कुरा स्थलगत रिपोर्टिङको दृष्टान्ते पुष्टि गरेको छ ।
शुक्रबार एक्कासी बढेको प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्यो । वायु प्रदुषणमा सुधार नआएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सोमबार शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसबाहेक सरकारले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न केही कदम चालेको देखिदैन । सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भएको आगलागि नियन्त्रणमा कुनै रणनिती बनाएको पाइँदैन । न त प्रदुषण बढाउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरुबारे नै सोच्न भ्याएको छ ।